Maqaallada Madhavi Vaidya ee Martech Zone |
Maqaallada by Madhavi Vaidya
Madhavi waa Qoraa Hal-abuur Hal abuur leh leh 8+ sano oo khibrad ah soosaarka B2B. Qoraa khibrad leh, ujeedadeedu waa in lagu daro qiime ganacsiyada iyada oo loo marayo xirfadaheeda gaarka ah ee qorista waxyaabaha ku jira. Waxay ujeedadeedu tahay inay dhisto buundo luuqadeed oo udhaxeysa tikniyoolajiyadda iyo adduunka ganacsiga iyada oo jeceyl u qabta ereyga qoran. Qoraalka mooyee, iyadu waxay jeceshahay rinjiga iyo karinta!
Labada Aaladood ee Ugu Waxtarka Badan Guusha Jiilka Hogaaminta B2B
Xullo u damqashada macaamiisha iyo khibrada macmiilka oo ah shey muhiim u ah istiraatiijiyaddaada waxaana laga yaabaa inaad sidoo kale horeyba u heshay gabalkii ka maqnaa ee hadda dhammaystiri kara xujooyinka jiilka hoggaaminaya!